मृत्यु : हेराइ र बुझाइ | Kendrabindu Nepal Online News
मृत्यु : हेराइ र बुझाइ
सरद विष्ट –
वीरबहादुरको नाबालक छोरो बिरामी भएर मर्‍यो । बिरामी छोरोलाई शहरका विभिन्न अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदा पनि केही सीप लागेन । उनले छोरालाई बचाउन सकेनन् । निष्ठुरी भगवानले आमाको काख नै रित्तो पारी दुधे छोरो लगिदियो । परिवारमा रुवावासी भयो ।
वीरबहादुर छाती ठोकीठोकी रुन थाले । उनको रुवाइले गर्दा सारा छिमेकीको आँखा पनि रसायो । एकजना बुज्रुक छिमेकी नजिकै आए र वीरबहादुरलाई सम्झाउन लागे– “भो नरोऊ, संसारको रीत यस्तै छ । जन्मेपछि मर्नैपर्छ । ढिलोचाँडोको कुरा हो । तिम्रो छोरालाई बालखैमा मर्न लेखेको रहेछ । दैवको अगाडि कसको के लाग्छ र । चित्त बुझाऊ बाबु, नरोऊ ।”
दिनहरू बित्दै गए । केही महिनापछि वीरबहादुरलाई सम्झाउने बुज्रुक छिमेकीको दुहुनो भैंसी मर्‍यो । भर्खरै ब्याएको लैनो भैंसी मरेको तोडमा उनी छाती पिटिपिटी रुन थाले । धेरैजनाले सम्झाए, तर उनको रुवाइ थामिएन । उनको यस्तो अवस्था देखेर केही महिनाअघि बीरबहादुर आए र सम्झाउन लागे– “भो नरोऊ, तिमी त बुझ्झकी मान्छे ।” मैले मेरो छोरो मर्दा त संसार हेरी चित्त बुझाएँ भने तिमी जाबो एउटा भैंसी मरेकामा पनि चित्त बुझाउन सक्दैनौ ? दुहुनो भैँसीको सट्टामा दुहुनो भैँसी नै ल्याउन सकिन्छ । अहिले किन रुनु पर्‍यो ? संसारको नियम र रीति हेरेर चित्त बुझाऊ भनेका थियौ मलाई । अहिले तिम्रो त्यो शिक्षा कता गयो ?’’
बुज्रुक व्यक्तिले भने– कहाँ त्यसो भनेर मन मान्दो रहेछ र ! मन बुझाउन सार्‍है गार्‍हो हुँदो रहेछ आफ्नाको मृत्युमा । यो त मेरो आफ्नो भैंसी पो ! तिम्रो छोराको मृत्युमा मलाई त्यति पीडा भएको थिएन, जति अहिले यो भैंसी मर्दा भएको छ ।
वीरबहादुर ट्वाँ परेर केही बेर ती बुज्रुक छिमेकीको मुखमा हेर्‍यो अनि जुरुक्क उठेर हिँड्यो ।
Prevयी हुन् कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारहरू
२०१९ मा निधन भएका १० विशिष्ट व्यक्तित्व (भिडियो रिपोर्ट)Next
कोरोनाबाट मृत्यु हुने मध्ये चीनमा भन्दा बढी इटालीमा
कोरोनाका कारण स्पेनका फुटबल प्रशिक्षकको मृत्यु
अत्यधिक मदिरा सेवनबाट धनुषामा पाँच जनाको मृत्यु